Mozilla ikozvino inorambidza kusabvumirwa kana kufukidzwa kodhi kusunungurwa | Linux Vakapindwa muropa
Mozilla parizvino inorambidza kusabhadharwa kodhi yakavanzwa kana yakavanzika
Mozilla yakayambira nezve kusimbiswa kwemapulagiji Catalog mitemo yeFirefox (Mozilla AMO) kupokana nekuiswa kwema plugins akashata.
Zvakanaka kubva munaJune 10, 2019 (gore razvino), zvicharambidzwa kuisa mukabhuku plugins anoshandisa obfuscation nzira, ndokuti, mapulagi anoshandisa nzira senge kurongedza kodhi iri muBase64 mabhuroko kana dzimwe nzira.
Firefox inokurudzira vagadziri kushandisa kodhi obfuscation kana kudzikisira nzira kuburitsa vhezheni itsva pamberi paJune 10 iyo inoenderana nemira-up-to-date AMO mitemo uye inosanganisira yakazara kodhi kodhi yezvinhu zvese.
Mushure maJune 10, matambudziko plugins anozovharwa mune dhairekitori uye mamiriro akaiswa kare anozoremerwa pamashandisirwo evashandisi nekuparadzirwa kwevatema
Pamusoro pezvo, tsika yekuvharira masisitimu akaisirwa pamashandisirwo evashandisi nemawedzero akaisirwa ane kukuvara kwakanyanya, kutyora zvakavanzika, uye kutora matanho pasina mvumo yemushandisi kana kutonga zvicharamba zvichienderera.
Mozilla ichatora matanho kune avo vasingateedzere mirau
Muzhinji, vagadziri vakasununguka kuchengetedza mapulagini avo muchimiro chavanosarudza.
Nekudaro, kuchengetedza zvakakwana data chengetedzo uye nekunyatso kuongorora kodhi, Mozilla inoda zvimwe zvehunyanzvi zvinodiwa izvo ma plugins ese anofanirwa kusangana.
Mapulagi anofanirwa kungokumbira mvumo inodiwa yebasa iri
Mapulagi anofanirwa kuve akazvimiririra uye kwete kurodha kure kodhi yekuitwa
Mapulagi anofanirwa kushandisa nzira dzakanyorwa kuti atumire data rekunzwisisa
Mapulagi anofanirwa kudzivirira kusanganisira mafaera kana zvisina kufanira mafaera
Imwe kodhi yekuwedzera inofanirwa kunyorwa nenzira inotaridzika uye inonzwisisika. Vaongorori vangakukumbire kuti ugadzirise zvikamu zvekodhi kana zvisiri kuongororwa.
Wedzera-ons haifanire kukanganisa mashandiro kana kugadzikana kweFirefox.
Chete kuburitsa vhezheni dzechitatu bato maraibhurari uye / kana masystem anogona kusungwa ne plugin. Kugadziriswa kumaraibhurari aya / masisitimu haatenderwe.
Zvichienderana nemhando yekutyorwa kwemitemo, Mozilla inoshandisa mhando dzakasiyana dzekukiya.
Na "Hard block", iyo plugins yakaremara muFirefox uye vashandisi havagone kupfuura block. Ichi chiito chakachengeterwa plugins ane anotevera hunhu:
Zvinotaridza kuti vari kubata chibharo nemaune
Izvo zvine zvakakomba kuchengetedzeka kusagadzikana.
Ivo vanokanganisa kuvanzika kwevashandisi.
Vanotadzisa zvakanyanya kubvumidzwa kwevashandisi kana kutonga.
Un Soft Software Lock icharemadza default plugin, asi tendera mushandisi kuipfuura uye nekuenderera mberi nekuishandisa. Iri kiyi inoshandiswa kuwedzera-neaya anotevera maitiro:
Zvinokonzera kugadzikana kwakakomba uye matambudziko ekuita muFirefox.
Iwo ane asiri-akakosha mutemo kutyorwa.
ari Mapulagi anoita kunge madonhwe, anodzokorora, kana kuvhara makopi eakavharika plugins anozobviswa zvakare.
Kana nyaya ikabata chete subset yeshanduro, iyo kiyi inogona kuiswa yakanangana neshanduro dzakabatwa Mapulagi ane yakavanda kana isingagoni kuverengwa kodhi anozovharwawo.
“Patinofunga kuvhara plug, tinokwanisa kubata mugadziri kana tichifunga kuti dambudziko rinogona kugadziriswa.
Sekuchengetedza kwevashandisi kungave kuri panjodzi, tinokumbira vanogadzira kuti vapindure mukati memazuva matatu. Kana pasina mhinduro inogamuchirwa mukati menguva ino kana kana mugadziri asingakwanise kugadzirisa nyaya, tinogona kuenderera nekukiya.
"Zvizhinji, hatizobata vanogadzira tisati tavhara kana plugin ikaratidza kuti inotyora mutemo wedu nemaune kana kutyora kwacho kwakanyanya."
Mozilla akadaro kuti zano rakagadzirirwa kukubatsira zvirinani kubata zvinowedzera zvisina kunaka:
"Patinofunga kuvhara chimwe chinowedzerwa muFirefox, tinoshamisika kana njodzi iripo zvekuti inodarika sarudzo yeMushandisi anofanira kuisa software, chishandiso chaanopa, pamwe nerusununguko rwemugadziri rwekugovera nekutonga. software yavo. "Kana tikazviwana tiri mumamiriro ezvinhu atisingakwanise kuita sarudzo yakajeka, isu tinotsvaga chengetedzo kuchengetedza mushandisi."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mozilla parizvino inorambidza kusabhadharwa kodhi yakavanzwa kana yakavanzika
Ini ndinofunga kutanga kwechikwata che firefox kwakakura sezvo kuwedzererwa nekodhi yakavharika kunogona kuve nekodhi yakaipa uye kuva spyware uye padanho rebrowser mu linux izvi zvakapetwa zvakanyanya sezvo TISINGASETE kubata neantivirus kana zvimwe zvakanaka zvemhando iyi uye tisingashandisi linux hatichisiri vanobatwa nemaapplicatives kana ma extensions anogona kutotora data rakakomba senge mapassword kana manhamba ekadhi rechikwereti. Zvinosuruvarisawo kuti basa rakanaka pachikamu che firefox rinogona kukanganiswa nekuwedzeredzwa kwekodhi inokatyamadza. Munguva yakapfuura, ini ndanga ndatova nemamwe matambudziko ekucherechedza otomatiki chiitiko chekutumira dhata kubva kune yangu yekubhurawuza nhoroondo pasina mvumo yangu, uye zvakare kuendesa zvakare kumapeji andanga ndisina kukumbira kana mukutsvaga kweGoogle uchindisiya ndakatsigirwa ma link anga asina chekuita nazvo. zvandaitsvaga.
Ini handisi Linux, asi yekutanga pfungwa ndeyekuti "zvigadziriso" zviri kuita kuti zviomere mushandisi kushandisa sarudzo dzinopa chengetedzo kana ruzivo kune mushandisi achivhura. Izvo zvakaoma kunyangwe kutsanangura nyeredzi seimwe nzira yekutsvaga injini. FF haisi kuwira mumaoko aGoogle here?
tsime, kubva mukusaziva kwangu kwekuronga ndiri naJuan; ad blockers, kuwedzera kune zvisina kujairika kushambadzira, zvakare inovhara zvakavanzika zvinongedzo, zvisingaperi pop-up spam kushambadzira, ... Chero kuvandudzwa maererano nekuchengeteka kunobatsira, asi wadii yambiro nezve yakatarwa yekuwedzera uye rega iwe usarudze kana iwe uchi block kana kwete? Yangu antivirus yekuwedzera yakavharwa, (yandingadai ndisina kubhadhara kana ndisina kuvimba nayo), uye izvozvi ndinomanikidzwa kutarisa ndisina kana pamahwindo. Zvinotaridza kwandiri kunge paternalistic mafungiro kuve muvhigier anozviti akazvimiririra, uye zvakadaro. Kana kuti pamwe pane zvimwe zvido zvakavanzwa semakodhi avanoti vanodzivirira
Julian Assange anopinda muhondo yekurwisa kuendeswa kuUnited States